Iindaba -Iqela leSercel kunye neTronic eliya kwiMEMS esekwe kwiiGeophones
I-Sercel kunye ne-TRONIC'S Microsystems, basebenzisane ukuvelisa isizukulwana esitsha seenzwa zenyikima, okanye iigeophones, esekwe kwi-MEMS. Eyilwe ngu-CEA Leti, isisombululo se-0.1µg yesisombululo esenziwe ngocoselelo senziwe saza saphuculwa zii-Microsystems ze-TRONIC.
IiGeophones zenza enye yeemveliso eziphambili zikaSercel (F), inkokeli yehlabathi kwizixhobo zenyikima yokuhlola ioyile kunye negesi. Iimvakalelo ezibuthathaka kakhulu, iigeophones zilinganisa ukubonakaliswa kwamaza e-acoustic, athunyelwe kumphezulu webala, kwiindawo ezahlukeneyo zejoloji (jonga umfanekiso 1). Idatha emva koko isetyenziselwa ukuzoba iimephu zophando lwejoloji ezibonisa indawo kunye nobungakanani beoyile kunye negesi.
IiGeophones, nangona zinexabiso eliphantsi lezinto zombane (jonga umfanekiso 2), ziye zaba nzima kwaye zinzima njengoko zifuna ukudityaniswa ngeentambo kwiyunithi yokulungisa esembindini. Ukuphononongwa kweoyile kwangoku kufuna ukuba kube lula ngakumbi, izisombululo eziziimobhayili ezinokukwazi ukuchaneka okuphezulu kakhulu.
I-geophone esekwe kwi-MEMS
USercel uchithe iminyaka eliqela esebenza ne-CEA Leti (F), ukubonisa ukwenzeka kunye nokuyila i-geophone esekwe kwi-MEMS. Intsebenziswano ikhokelele kwiprototype ye-geophone encinci encinci kunye nokukhanya okuthe kratya (jonga umzobo 2 kunye netafile 1).
Iprototype ifikelele kwimidlalo efunekayo egqithileyo: isisombululo ukuya kuthi ga kwi-0.1µg, ngaphantsi kwesigidi somhlaba womxhuzulane, kuluhlu lwe- +/- 100mg.
Nangona kunjalo, owona mceli mngeni mkhulu ubekwe ekususeni isisombululo esisekwe kwi-MEMS ukusuka elabhoratri ukuya kumgca wemveliso. I-MEMS ngokwenyani ayinazo iinkqubo zokumila ezisemgangathweni kwaye ineemfuno zokupakisha ezifuna kakhulu kunye neenkqubo zokuvavanya ezithile. U-Sercel ke ngoko ufuna umenzi we-MEMS wesiko onokuthi aguqule umxholo wakhe we-MEMS kwimveliso yezorhwebo ethembekileyo.
Umzi mveliso weGeophone
Unamava okuvelisa kunye nokuvelisa ii-accelerometer ze-MEMS zesiko, ii-Microsystems ze-TRONIC'S (F) zikwazazi iibhloko zokwakha itekhnoloji yejografi kaSercel.
Imodeli yeshishini eliphambili lesiko lokuvelisa iMEMS lalifanele ngokukodwa kwiimfuno zokuvelisa zikaSercel. Ke ngoko ezi nkampani zimbini zangena kubambiswano lweshishini
Ukuqala kwiiprototypes, iTronon yenze ukuba isixhobo sisebenze kwaye ilungele inkqubo yaso ethile kunye neendlela zokupakisha. Umvelisi waseFrance emva koko waqinisekisa uthotho lokuqala ukuhanjiswa kwangoko kwangoko ngo-2003 kwaye namhlanje uhambisa izinto zejometri ezipakishwe zavavanywa (jonga umfanekiso 3) uSercel adityaniswa kwiinkqubo ezintsha zedijithali.
Iphakheji yokuphucula iMEMS
Ukunciphisa ingxolo yemolekyuli kulwakhiwo kunye nokufikelela kumanqanaba okusebenza afunekayo, I-TRONIC'S ifaka isakhelo se-silicon phantsi kobume obuphezulu kakhulu kwindawo yokupakisha ye-LCC. Oku kupakishwa kuvumela i-geometri ye-MEMS ukuba igqithe kwi-Q factor engaphezulu kwe-10.000 (uqikelelo lwesithuba kwisithuba se-1mTorr).
Incinci kwaye ilula, i-vacuum epakishwe i-MEMS geophone yaze yagqwesa kwezinye iinkcukacha eziphambili zejogones zesiko (jonga kwitheyibhile 1).
Ukongeza, ii-geophones ezi-3 ze-MEMS zinokudityaniswa kunye kwindawo encinci kakhulu kunye nekhompyuter yedijithali isusa ezinye zeentambo ezazifuneka ngaphambili. I-geophone entsha esekwe kwi-MEMS ke ngoko iququzelela ukulungiswa kwabathengi beSercel ngelixa ivumela imilinganiselo ye-3 yomlinganiso ngamandla aphezulu.
Ngale ntsebenziswano, i-TRONIC'S Microsystems iphinde yaqinisekisa amandla ayo okuguqula iikhonsepthi ze-MEMS zesiko kwiimveliso zentsebenzo ephezulu ethembekileyo yokusetyenziswa kwezicelo.